शीर्ष नेता कुन-कुनले कसरी मनाउँदै छन् दसैँ ? हेर्नुहोस | Hulaki Online
२०७३ आश्विन २२, शनिबार ०९:१५
शीर्ष नेता कुन-कुनले कसरी मनाउँदै छन् दसैँ ? हेर्नुहोस
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले २५ असोज बिहान शुभसाइतमा ८ः४५ मा टीका ग्रहण गर्ने भएकी छिन् । उनकी आमा छोराका साथ अमेरिकामा रहेकाले यस वर्ष उनको हातबाट राष्ट्रपतिले टीका ग्रहण नगर्ने प्रेस संयोजक माधव शर्माले बताए । राष्ट्रपतिले ११ देखि १२ बजेसम्म सल्लाहकार समूह र कार्यालयका कर्मचारीलाई टीका लगाइदिनेछिन् ।
१ देखि २ बजेसम्म प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरू, राजनीतिक दलका नेता, सांसद, संवैधानिक निकायका प्रमुख, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका इच्छुक अधिकृतले टीका ग्रहण गर्ने गरी समय व्यवस्थापन गरिएको शर्माले जानकारी दिए । दिउँसो २ देखि ५ बजेसम्म भने राष्ट्रपतिले इच्छुक सर्वसाधारणलाई टीका लगाइदिनेछिन् ।
मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारको दसैँ मनाउने कार्यक्रम छैन । उनको दाइकी श्रीमतीको निधन भएकाले दसैँ मनाउने कार्यक्रम नरहेको छोरा सुवास गच्छदारले जानकारी दिए । ‘आफन्तको निधन भएकाले दसँै हँुदैन, दसैँमा हामी काठमाडौंमै हुन्छौँ, तर खास कार्यक्रम भने छैन,’ उनले भने । गच्छदारले दसँैमा केही अध्ययन गर्ने र कार्यकर्तासँगको भेटघाटमा समय बिताउने योजना बनाएका छन् ।
हुलाकीअनल़ाइन - २०७३ आश्विन २२, शनिबार ०९:१५